kunming.cn - ယူနန်ပြည်နယ်၌ တောမှိုများများရောင်းချနေ၍ ဈေးလျှော့ချလာ
ယူနန်ပြည်နယ်၌ တောမှိုများများရောင်းချနေ၍ ဈေးလျှော့ချလာ
2020-08-21 10:22 ရောင်စုံတိမ်တံတား
(ရောင်စုံတိမ်တံတား၊ လဲ့ရွှေရည်) အခုတလော ယူနန်လူတို့သည် တောမှိုများများရောင်းချသည့် အချိန်ကာလကို ကြိုဆိုလာ၍ ဈေးလျှော့ချခြင်းနှင့်အမျှ စားသုံးသူတို့သည် တောမှိုများများဝယ်နေပါသည်၊ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်သော တောမှို လွတ်လပ်စွာစားခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ပါသည် ဟု စားသုံးသူအချို့သည် ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
ဈေးသည် ယခင်ထက် လျှော့ကျလာ (အောက်တွင် ဇူလိုင်လ ၂၈ရက်နေ့မှ ၂၉ရက်နေ့အတွင်းမှ ဈေး)
Collybia albuminosa တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၁၆၀ မှ ၂၆၀ အထိ၊ Tricholoma matsutake (lto et lmai) Singer တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၁၆၀ မှ ၃၆၀ အထိ၊ Thelephora ganbajun Zang တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၃၅၀ မှ ၁၀၀၀ အထိ၊ Boletus luridus တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၈၀ မှ ၁၃၀ အထိ၊ Russula virescens တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၈၀ မှ ၁၃၀ အထိ၊ Boletus aereus တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၆၀ မှ ၉၀ အထိ၊ Boletus edulis တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၂၀ မှ ၆၀ အထိ၊ Boletus albidus Rop တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၈၀၊ Cantharellus cibarius Fr. တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၆၀ ဖြစ်ပါသည်။
ပေယွန့်လယ်ထွက်ပစ္စည်းများ အထွေထွေလက်ကားရောင်းဈေး (အနောက်တောင်ပိုင်း တောမှိုရောင်းဝယ်ရေးစင်တာ)
Tricholoma matsutake (lto et lmai) Singer တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၁၅၀ မှ ၃၅၀ အထိ၊ Thelephora ganbajun Zang တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၄၅၀ မှ ၈၀၀ အထိ၊ Russula virescens တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၇၀ မှ ၁၆၀ အထိ၊ Boletus luridus တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၈၀ မှ ၁၄၀ အထိ၊ Collybia albuminosa တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၈၀ မှ ၂၆၀ အထိ၊ Russula aeruginea Lindb. : Fr. တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၄၀ မှ ၆၀ အထိ၊ Cantharellus cibarius Fr. တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၇၀၊ Boletus aereus တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၆၀၊ Agaricus deliciosus တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၆၀ ဖြစ်ပါသည်။
ဟောင်စိကျက် ပင်လယ်အစားအစာ ပါသည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းဈေး
Tricholoma matsutake (lto et lmai) Singer တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၃၀၀ မှ ၅၀၀ အထိ၊ Collybia albuminosa တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၂၆၀ မှ ၅၀၀ အထိ၊ Russula virescens တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၈၀ မှ ၁၅၀ အထိ၊ Thelephora ganbajun Zang တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၃၀၀ မှ ၁၀၀၀ အထိ၊ Boletus luridus တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၈၀ မှ ၁၅၀ အထိ၊ Agaricus deliciosus တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၅၀ မှ ၁၀၀ အထိ၊ Ramaria botrytoides တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၅၀ မှ ၁၀၀ အထိ ဖြစ်ပါသည်။
Collybia albuminosa တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၂၆၀ မှ ၄၅၀ အထိ၊ Thelephora ganbajun Zang တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၈၀၀ မှ ၁၆၀၀ အထိ၊ Russula virescens တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၁၂၀ မှ ၁၆၀ အထိ၊ Boletus luridus တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၅၀ မှ ၁၃၀ အထိ၊ Tricholoma matsutake (lto et lmai) Singer တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၄၅၀ မှ ၆၀၀ အထိ၊ Cantharellus cibarius Fr. တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၁၂၀ ဖြစ်ပါသည်။
Tricholoma matsutake (lto et lmai) Singer တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၁၂၀ မှ ၃၆၀ အထိ၊ Boletus luridus တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၈၀ မှ ၁၂၀ အထိ၊ Thelephora ganbajun Zang တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၄၀၀ မှ ၁၈၀၀ အထိ၊ Collybia albuminosa တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၁၈၀ မှ ၃၂၀ အထိ၊ Russula virescens တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၈၀ မှ ၁၄၀ အထိ၊ Chanterelle တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၈၀ မှ ၁၂၀ အထိ၊ Boletus aereus တစ်ကီလိုဂရမ် အယွမ် ၄၀ မှ ၆၀ အထိ ဖြစ်ပါသည်။
ဈေးများထဲမှ တောမှိုအများကြီးသည် မူဆွေဟွားတောမှိုရောင်းဝယ်ရေးစင်တာမှ လာ၍ ရောင်းဝယ်ရေးစင်တာ၌ တောမှိုများကို ပထမအကြိမ် ခွဲခြားသိမြင်ခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့် ဈေးထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် အများအားဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် စစ်ဆေးပြီးမှ ရောင်းချလျက်ရှိသည် ဖြစ်ကြောင်း။ တောမှိုအမျိုးအစားကို စစ်ဆေးသည့်အပြင် ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနများသည် ပြန်ကြားရေးပိုစတာကပ်ပြီး စားသုံးသူများသည် တောမှိုများကို မည်သို့စားသုံးပြီး ချက်ပြုတ်သနည်းအား ရှေ့ဆောင်ညွှန်ပြလျက်ရှိသည် ဖြစ်ကြောင်း ဟု သတင်းထောက်သည် ဟောင်စိကျက် ပင်လယ်အစားအစာ ပါသည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းဈေးနှင့် ဝူလီတိုးနုံပေါ်ကွင်းပြင် စသည့် ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနများမှ သတင်းသိရှိရခဲ့ပါသည်။
သတိပေးချက်။။ တောမှိုစားသောကြောင့်အဆိပ်သင့်သည့် အရေးကိစ္စသည် ကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်ပွားလာ
ဇူလိုင်လ ၂၀ရက်နေ့အထိ၊ ဤနှစ် ယူနန်ပြည်နယ်၌ တောမှိုစားသောကြောင့် အဆိပ်သင့်သည့် အရေးကိစ္စ ၂၇၃ကြိမ် ဖြစ်ပွားလာပြီး လူ ၁၂ ယောက် သေခဲ့ပါပြီ၊ အခုအထိ တစ်ပြည်နယ်လုံးအတွင်း အောင်မြင်စွာ ဆေးကုပေးခြင်းဖြင့် အသက်ကယ်သည့် အဆိပ်သင့်သည့် ဖျားနာသူ စုစုပေါင်း အယောက် ၂ ထောင်ကျော် ရှိပါပြီ။ သိမကျွမ်းသော တောမှိုမျိုးများကို ဆွတ်ခူးစားသုံး မရ၊ ဘယ်တောမှိုမဆို လက်သုတ်မစားရ၊ ချက်ပြုတ်ကျက်ပြီးမြောက်ပြီးနောက် စားပါ၊ တောမှိုစားချိန် အရက်မသောက်ရ၊ တောမှိုစားပြီးနောက် မသင့်တော် (အော့အန်ချင်ခြင်း၊ ခေါင်းမေ့မျောခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ပစ္စည်းမြင်ချိန်မထင်ရှားခြင်း နို့မဟုတ် ယောင်မှားသောအာရုံခံစားမှုဖြစ်ပွားလာခြင်း စသည့် ရောဂါလက္ခဏာများရှိ)လျှင် ဆေးရုံသို့ ချက်ချင်းသွားပြီး ကုသခံရမည် ဟုယူနန်ပြည်နယ် ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာနသည် ထပ်မံသတိပေးခဲ့ပါသည်။
2020年08月21日 10:22 昆明信息港-彩云桥
鸡枞160-260元/公斤　松茸160-360元/公斤　干巴菌350-1000元/公斤　见手青80-130元/公斤 青头菌80-130元/公斤　黑牛肝60-90元/公斤　美味牛肝20-60元/公斤　白葱80元/公斤 鸡油菌60元/公斤
松茸150-350元/公斤　干巴菌450-800元/公斤　青头菌70-160元/公斤　见手青80-140元/公斤　鸡枞80-260元/公斤　铜绿菌40-60元/公斤　鸡油菌70元/公斤　黑牛肝60元/公斤　谷熟菌60元/公斤
松茸300-500元/公斤　鸡枞260-500元/公斤　青头菌80-150元/公斤 干巴菌300-1000元/公斤　见手青80-150元/公斤　谷熟菌50-100元/公斤　扫把菌50-100元/公斤
鸡枞260-450元/公斤　干巴菌800-1600元/公斤　青头菌120-160元/公斤　见手青50-130元/公斤 松茸450-600元/公斤　鸡油菌120元/公斤
松茸120-360元/公斤 见手青80-120元/公斤 干巴菌400-1800元/公斤　鸡枞180-320元/公斤　青头菌80-140元/公斤 黄牛肝80-120元/公斤 黑牛肝40-60元/公斤